Indlela yokunciphisa ubungakanani bePDF: Zonke iindlela | Iindaba zeGajethi
U-Eder Esteban | | software, Tutorials
I-PDF yifomathi esisebenza ngayo rhoqo. Kwiimeko ezininzi sifuna ukuguqula le fomathi iye kwabanye, njengakwiJPG okanye indlela yokuvula. Nangona enye imeko eqhelekileyo kukuba sifuna ukunciphisa ubungakanani bolu hlobo lwefayile. Ngokubanzi, iifayile esinazo kule fomathi zinzima. Ke ngoko, ukuba kuya kufuneka sithumele aliqela kwi-imeyile, sinokulinganiselwa.
Nangona kukho ezininzi iindlela zokunciphisa ubungakanani befayile yePDF. Ngale ndlela, ngaphandle kokuphulukana nolwazi okanye ukwenza ukuba umgangatho ube mandundu, siza kuyenza le fayile kuthethwa ngayo inobunzima obungaphantsi. Yintoni enokwenza kube lula ukuthumela ngaphezulu kwi-imeyile okanye ngokuthatha indawo encinci kwikhompyuter yakho.
1 Isicinezeli sePDF esikwi-Intanethi
2 Imboniso kwi-Mac
3 Sebenzisa iAdobe Acrobat Pro
Isicinezeli sePDF esikwi-Intanethi
Indlela yokuqala yokunciphisa ubungakanani bePDF ilula kakhulu. Kuba sinokusebenzisa amaphepha ewebhu ukuba vumela ezi fayile ukuba zinciphise ubunzima bazo. Ngexesha elide, amaninzi amaphepha anjalo avele. Kuzo zonke iimeko, ukusebenza kwazo kuyafana. Kufuneka ulayishe ifayile okanye iifayile ekubhekiswa kuyo kwaye uvumele iwebhu ukuba yenze umsebenzi wayo. Into eya kuyenza ukunciphisa ubunzima bayo. Emva koko sinokuzikhuphela kwikhompyuter. Yindlela elula ngayo le nkqubo.
Kukho amanye ala maphepha ewebhu athandwayo kubasebenzisi abaninzi. Ke azizisi ngxaki xa kuziwa ekusebenziseni. Kuya kuxhomekeka kwinxalenye kukhetho lomntu ngamnye. Kodwa ukusebenza kwazo zonke kuyafana ngandlela zonke. Olona khetho lubalaseleyo namhlanje zezi:
Kuzo zonke kufuneka ulayishe ifayile kwiwebhu kwaye ulinde ukuba kuncitshiswe ngobukhulu. Kukho iimeko apho ubukhulu bokulondolozwa kwinxalenye yakho bunokumangalisa. Ke kufanelekile ukuba uthathele ingqalelo olu khetho. Kwakhona, kulula ukuyisebenzisa. Ngokunokwenzeka iphepha lokuqala lewebhu lelona laziwayo kuzo zonke. Kodwa zonke ziya kukunika intsebenzo elungileyo malunga noku.
Kulabo basebenzise iMac, banendlela ekhoyo kwikhompyuter ebavumela ukuba banciphise ubungakanani bePDF ngaphandle kokubhenela kwiphepha lewebhu. Olu luluhlu lweMac, eya kuthi inike oku kunokwenzeka. Into yokuqala yokwenza kukuvula uxwebhu lwePDF ekuthethwa ngalo. Ukwenza oku, kuya kufuneka ufake ifayile kwaye ukhethe ukuvula. Okulandelayo, kuya kufuneka ukhethe ifayile ofuna ukuyivula ngelo xesha, ukunciphisa ubungakanani bayo.
Nje ukuba unefayile ebuzwayo kwiscreen, kuya kufuneka ucofe ukhetho kwifayile ephezulu kwesikrini. Ukusuka kukhetho olubonakala ngoku kwimenyu yokuma, kufuneka ucofe ku "Rhweba ngaphandle njengo ...". Emva koko kuvula iwindow entsha apho unokuthi uqwalasele indlela ofuna ukuthumela ngayo ifayile.
Elinye lamacandelo kwiscreen yifomathi. Ecaleni kwayo kukho uluhlu olwehlayo, apho kubonakala khona iPDF ngoku. Nangona singatshintsha ifomathi yefayile nangaliphi na ixesha, nangona ngoku singazukuyenza. Ngaphantsi kolu khetho sifumana enye, ebizwa ngokuba yiQuartz Filter. Ecaleni kolu khetho kukho olunye uluhlu olwehlayo, ekufuneka sicofe kulo.
Xa usenza oku, uthotho lweenketho ziyavela kwiscreen, esiya kuthi sivumele ukuba senze okuthile malunga nefayile ekhankanyiweyo. Uya kubona ukuba enye yeenketho kuloluhlu ibizwa "Nciphisa ubungakanani befayile". Kukulo ekufuneka sichofoze kulo mzekelo. Yiyo le into eza kusivumela ukuba sinciphise ubungakanani bale PDF. Emva koko, kufuneka sikhethe indawo apho sifuna ukugcina ifayile.
Ngale ndlela, Uya kubona ukuba iPDF iye yalula, ngokuthatha indawo encinci kwi-Mac yakho, indlela elula, kodwa inokuba luncedo kakhulu ukuba uneMac.Lo msebenzi ubakhona phantse kuzo zonke iinguqulelo zeMacOS. Ke ungayisebenzisa ngaphandle kwengxaki.
Sebenzisa iAdobe Acrobat Pro
Okokugqibela, ukhetho olunokusetyenziswa kwiikhompyuter zeWindows, ukongeza kwi-Mac. I-Adobe Acrobat Pro kufuneka ifakwe kuyo ukuze ukwazi ukwenza le nkqubo ukunciphisa ubungakanani befayile yePDF. Into yokuqala ekufuneka uyenzile ukuvula ifayile ekubhekiswa kuyo ukuba ubungakanani bayo ufuna ukuyinciphisa kule nkqubo. Nje ukuba le fayile sele ikwisikrini, singaqala inkqubo.
Kuya kufuneka sinqakraze kwifayile ukhetho oluphezulu kwesikrini. Imenyu yokuqulathiweyo iya kuthi emva koko ivele kwiscreen ngeendlela ezahlukeneyo. Enye yeenketho, apho kufuneka ucofe khona, kukugcina njengenye. Xa unqakraza nge mouse kule ndlela, imenyu izakuvela ekunene kwayo. Ngale ndlela, iindlela ezahlukeneyo ziya kuboniswa, ezivumela ukuguqula iPDF ibe ziifomathi ezahlukeneyo.
Phakathi kwezi zikhetho sifumana into enomdla kuthi. Lukhetho olubizwa ngokuba lucuthekile ubukhulu bePDF, ebonakala embindini woluhlu. Kuya kufuneka ucofe kuyo ukuze uqhubeke nenkqubo. Emva koko, inkqubo iya kusibuza ukuba zeziphi iinguqulelo esifuna ukuba zihambelane nazo, kukho uluhlu olwehlayo kwiscreen ukumisela oku. Kungcono ukhethe ingxelo yokugqibela yenkqubo, njengoko iya kunciphisa ngakumbi ubungakanani befayile.
Nje ukuba yenziwe, Kuya kufuneka ukhethe indawo apho ufuna ukugcina khona wathi ifayile kwikhompyuter yakho. Uya kubona ukuba ubukhulu bayo buncitshiswe kakhulu. Enye indlela elungileyo yokwenza iPDF incinci.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Tutorials » Ungayicinezela njani iPDF
Inethiwekhi yeVodafone iyehla, ishiya amawaka abathengi ngaphandle kwe-intanethi